Mgbe-sales ọrụ - Weifang Huaxing Machinery Co., Ltd
1. Nwụnye na Jizọs na-ezipụ nke:
a.We ga-eziga 1-2 technicians aka na igwe echichi na nyere, ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ ha tiketi, hotel na nri, wdg
b.Customer kwesịrị ndokwa 5-6 ọkà ọrụ ma kwadebe wụnye ígwè na ngwaọrụ.
2. Akwụkwọ ikike oge:
a. 12 ọnwa site na ụbọchị nke nyere gwụchara;
b. Ọ bụrụ na àgwà nsogbu bilitere ka ha na akwụkwọ ikike oge, na kwupụtara na na nsogbu anyị igwe kama mpụga ma ọ bụ eke ihe (Rụtụ aka nile di iche iche nke ọdachi, mbupu, loading, ebutu, na-ezighị ezi-operation, wdg), anyị ga- ezitekwara mkpa akụkụ ahụ mapụtara n'efu maka mmezi;
Ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị arụ ọrụ, anyị ga-ezitere anyị engineer na-ejere gị ozi ruo mgbe nsogbu a ga-eme, na anyị ga-akwụ ada tiketi.
mgbe akwụkwọ ikike mgbe, anyị nwere ike na-enye ndị chọrọ akụkụ ahụ mapụtara gị n'okpuru eri price.
3. Tụkwasịnụ full English akwụkwọ:
tinyere ntọala Eserese, ntuziaka akwụkwọ, electric wiring esereese, electric ntuziaka akwụkwọ na mmezi akwụkwọ, etc.